Select Your Course UCAM
1.	Discount များကို ပေါင်းစပ်ခံစားခွင့်မရှိပါ။ Discount တစ်မျိုးထဲသာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
2.	ကျောင်းလခများကို မည်သည့်အခြေအနေအကြောင်းနှင့်မျှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
3.	ကျောင်းလခဆိုသည်မှာ ကျောင်းသား/သူမှ ကျောင်းသို့ USD Dollar ဖြင့်ပေးသွင်းရခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
4.	ကျောင်းလခများပေးသွင်းချိန်တွင် Aya Bank ၏ Selling Price Rate အတိုင်း တွက်ချက်ပြီး မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့်သာ ပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
5.	အတန်းစသည့်နေ့တွင် Payment Plan အရ Down Payment ပြည့်မီမှသာ အတန်းတက်ရောက်ခွင့် ပြုမည် ဖြစ်သည်။
6.	ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ပေးသွင်းရမည့်ကျောင်းလခများအား Payment Plan တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတိုင်း အတိအကျသွင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းနေ့သည် ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါက ရုံးဖွင့်ရက်တွင် ပေးသွင်း ရမည်။
7.	သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်းလခများအား စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအရ ပေးသွင်းရန်ပျက်ကွက်ပါက သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်းအား ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းကျောင်းသား/သူများ၏ Assignment များအား လက်ခံ စစ်ဆေးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Exam များကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
8.	Friend Recommend Friend (FRF) ခံစားခွင့်ကို နောက်ဆုံး Payment တွင်သာ ခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
9.	Friend Recommend Friend (FRF) ခံစားခွင့်ကို တက်ရောက်မည့်ကျောင်းသား/သူ၏ သတ်မှတ်ထားသော Payment Amount ပြည့်မီမှသာ ခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
10.	ကျောင်းသား/သူများ Intake တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကူပြောင်းတက်လိုလျှင် Deferment Form တင်ပေး ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Defer fee MMK 400,000/- ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
11.	ကျောင်းသား/သူများသည် ငွေပေးချေရာတွင် ကျောင်းသို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေပမာဏကို ကျောင်း၌ငွေသားဖြင့် တိုက်ရိုက်ပေးချေခြင်း၊ Invoice တွင်ဖေါ်ပြထားသော မိမိရွေးချယ်ထားသည့် ဘဏ်အကောင့်များမှတဆင့် ပေးချေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
12.	ဘဏ်ဖြင့်ပေးသွင်းရာ၌ Description တွင် ကျောင်းသား/သူ၏ အမည်နှင့် Intake ကို တိတိကျကျဖေါ်ပြပေး ရမည် ဖြစ်သည်။
13.	ကျောင်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်အကောင့် (သို့မဟုတ်) Payment Application သို့ ကျောင်းလခ ပေးသွင်းရန်နှင့် ဤကဲ့သို့ ပေးသွင်းခြင်းမပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စရပ်များကို ကျောင်းမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်း ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
14.	Payment Plan အား မည်သည့်အခြေအနေအကြောင်းနှင့်မျှ ပြောင်းလဲပေးမည် မဟုတ်ပါ။
15.	ကျောင်း၌ ငွေသားဖြင့် တိုက်ရိုက်ပေးချေလျှင် ကျောင်းမှငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို ကျောင်းသား/သူသို့ ငွေလက်ခံ ရရှိသည့်နေ့တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
16.	ဘဏ်အကောင့်မှတစ်ဆင့်ပေးချေပါက ကျောင်းသား/သူသို့ ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ Working days (၅) ရက်အတွင်း Online မှတစ်ဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
(3)Household List Notary
(4)Work Recommendation Letter
(6)Bachelor Mark List
(7)Matriculation Passed letter Notary
(8)Matriculation Exam Marks Notary
Please submit documents soft copy to [email protected] (email address)